Proverb 164 Akondro jinjaina hariva : raha tsy malazon' ny andro aza, mantsasaky ny alina . [Veyrières 1913 #2582]
Proverb 413 Andevolahy mamono tompo mangina : voky hena indray alina , fa hiongo-belona herintaona . [Veyrières 1913 #512, Cousins 1871]
Proverb 679 Asaina andro , dia andro ; asaina alina , dia alina . [Veyrières 1913 #368]
Proverb 1141 Aza manao tahaka any ilay kamo : voky antoandro , entiko matory aza izany; voky alina, entiko miasa aza izany. [Cousins 1871 #506]
Aza manao tahaka an' ilay kamo : voky antoandro , entiko matory aza izany ; voky alina , entiko miasa aza izany. [Veyrières 1913 #3901]
Aza manao tahaka ilay kamo : voky antoandro , entiko matory aza izany, voky alina entiko miasa aza izany. [Rinara 1974 #579]
Proverb 1176 Aza manao tokin-tsabakaka : raha antoandro manidy trano , fa raha alina vao mandehandeha . [Cousins 1871 #519]
Aza manao tokin-tsaobakaka : raha antoandro manidy trano , fa raha alina mandehandeha . [Rinara 1974 #592]
Aza manao tokin-tsaobakaka : raha antoandro manidy trano , fa raha alina vao mandehandeha . [Veyrières 1913 #6217]
Manao tokin-tsahobakaka : antoandro mihidy aman-trano , alina mandehandeha . [Rinara 1974 #2016]
Proverb 1467 Aza mitotototo toy ny ondry terak' alina . [Rinara 1974 #804]
Proverb 1851 Dridran' Ingilo ka manonitra andro aman' alina . [Rinara 1974 #1015]
Proverb 1861 Efa lany rambo tahaka ny jono indray alina . [Rinara 1974 #1022]
Efa lany rambo toy ny jono indray alina . [Houlder 1895 #973, Veyrières 1913 #2490, Cousins 1871 #866]
Proverb 2053 Faty entin' alina ka tsy manampidiny . [Rinara 1974 #1155]
Proverb 2677 Izay manao ratsy : raha tsy malazon' ny andro , mantsasaky ny alina . [Houlder 1895 #1717, Veyrières 1913 #5662]
Proverb 2908 Kifafa ka miongana andro , miongana alina . [Rinara 1974 #1648]
Proverb 3402 Mamatona alina . [Veyrières 1913 #6580]
Misasaka alina . [Veyrières 1913 #6580]
Proverb 3541 Manao azy ho akan' ny alina ka mitsipy sandry maizim-bolana . [Rinara 1974 #1986]
Manao azy ho akan’ ny dia, ka mitsipy sandry maizim-bolana . [Cousins 1871 #1529]
Manao ho akan' ny alina , ka misavily sandry maizim-bolana . [Houlder 1895 #50]
Proverb 3636 Manaram-po ohatra ny banga mihomehy alina . [Rinara 1974]
Manaram-po ohatra ny banga mihomehy maizina . [Rajemisa 1985]
Proverb 3700 Mandoaka ny alina . [Veyrières 1913]
Miloaka alina . [Veyrières 1913]
Proverb 3959 Maty ny mpiambina , ka tsy misy mpitomany alina . [Veyrières 1913 #2872]
Maty ny mpiambina ka tsy misy mpitomany ny alina . [Rinara 1974 #2207]
Maty ny mpiamhina , ka tsy misy mpitomany alina. [Cousins 1871 #1666]
Proverb 4119 Midrikina alina toa angelinkary . [Rinara 1974]
Proverb 4274 Mipapapapa ohatra ny ondry teraka alina . [Rinara 1974]
Proverb 4307 Misamonona andro aman' alina toa moka . [Rinara 1974 #2401]
Proverb 4362 Mitaitay ho any Ilafy , ka mody alina . [Veyrières 1913 #3041]
Proverb 4490 Mitsotra alina fa mivonkina antoandro toa sokina . [Rinara 1974 #2509]
Mitsotra alina , mivonkina antoandro toa sokina . [Veyrières 1913 #2041]
Mitsotra alina, mivonkona antoandro , toa sokina. [Cousins 1871 #1910]
Proverb 4674 Mpivoaka alina . [Veyrières 1913 #166]
Proverb 4893 Ny alina natao tsy ho lasa ve, sa misy fahoriana natao tsy hisava? [Rinara 1974]
Proverb 5070 Ny fanompoana ny manjaka : anio dia anio , maraina dia maraina , alina dia alina . [Veyrières 1913 #386]
Proverb 5378 Ny mpamosavy aza mivoaka misasaka alina dia hita ihany, ka indrindra fa izay manao ratsy antoandro . [Houlder 1895]
Proverb 5616 Ny trebitrebiky ny rano ka re fa ny aomby nihanana tsy hita. [Samson 1965 #N14]
Proverb 6424 Sakafom-borondolo ka ny alina no miantoka ny antoandro . [Veyrières 1913 #4318, Rinara 1974 #3791, Rajemisa 1985]
Sakafom-borondolo : ny alina no miantoka ny andro. [Cousins 1871 #2828]
Proverb 7081 Toha-bary tsindrian-tsovok' alina : miandro mialina ihany. [Veyrières 1913 #3144, Rinara 1974 #4146, Cousins 1871]
Proverb 7082 Toha-bary tsindrian-tsovok' alina : voaka ampinga no tsy natao, fa ny fo dia miramirana . [Veyrières 1913 #3145, Cousins 1871 #3104]
Toha-bary tsindrian-tsovok' alina : voaka ampinga no tsy natao fa ny fo miramirana . [Rinara 1974 #4147]
Proverb 7925 Tsy zavon-kariva , ka hanafaingana ny aizin' ny alina . [Rinara 1974 #4811]
Proverb 8269 Voatamenaka nohanim-boalavo , ka ratsy vava indray alina ihany. [Rinara 1974 #5000]
Voatavomenaka nohanim-boalavo : ratsy vava indray alina ihany. [Cousins 1871]